Amakhadi oshishino angaze aphume ngohlobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngexesha lobuchwephesha kunye nenkqubela phambili eninzi eqhuba unxibelelwano, ukuthengisa, njl njl, ngubani onokuyicinga loo nto makhadi o shishino bagcina indawo yabo enelungelo kunye nokusebenziseka kwabo okungenakuphikiswa.
1 Kutheni amakhadi oshishino engaphumi ngohlobo?
2 Izinto ezinokusetyenziswa, iphepha, ikhadibhodi, iPV kunye nezinye izinto zokwenziwa
Kutheni amakhadi oshishino engaphumi ngohlobo?
Ngoku kunakuqala kwaye andiboni Eyona ndlela yokushiya idatha yenkampani yakho, iinkonzo, umsebenzi, njl.
Kude ekumeni, amakhadi oshishino ziye zavela ecaleni kwetekhnoloji esetyenziswe kubugcisa begraphicKungenxa yoko le nto kulula kakhulu ukufumana iintlobo ngeentlobo zemathiriyeli, izinto zenoveli, ezinoyilo loqobo ezigcwele ubuchule kwaye zilungiselelwe ukuthanda kunye neemfuno zabo bazisebenzisayo ukukhuthaza ngokuthe ngqo nangempumelelo inkampani okanye iinkonzo zabo.
Ndinyanzelisa ukuba itekhnoloji yenye yezona zinto zidibeneyo kumakhadi eshishini akwabangela iindleko eziphantsi, umzekelo, abashicileli abakwi-Intanethi banegalelo ekuthobeni oku kwaye bavumela ukusetyenziswa okungcono kwekhadi ngokusebenzisa amacala alo omabini. Xa unendawo engaphezulu onayo, unokongeza ezinye izinto kunye nika umnxeba wokuqala kunye nobuchule bokuyilaUkuhambisa umfanekiso, iinombolo zomnxeba, idilesi, iimveliso, iinkonzo, iinethiwekhi zentlalo, ikhowudi ye-QR, njl.
Obu buso bubini bunokusetyenziswa ngezinye iindlela ezisebenzayo, ezisebenzayo, ezonwabisayo okanye ezithandekayo kumntu ofumana ikhadi, umzekelo woku beka ikhalenda, umfanekiso omhle, itafile yokuguqula, Njl
Ikhadi inikeza indawo encinciNangona kunjalo, iintlobo ngeentlobo zoyilo ezinokubakho kuyo zibanzi kangangokuba kufuneka ukhethe kuphela uyilo olufanelekileyo apho ubuchwephesha bufundeka kwaye umfanekiso ubonakala ngokucacileyo, ukuze iinkcukacha eziphambili zokuchonga inkampani zingalahleki.
Imarike ikwabonelela nge- uluhlu olubanzi lwamaphepha, uburhabaxa, imibala, ubukhulu, umgangatho ngendlela yokuba ukhethe leyo uyijonga njengeyona ilungileyo kumakhadi akho oshishino.
Ngale ndlela, umgangatho kunye nobukhulu bezi zinto kufanele ukuhlangabezana neemfuno ezisezantsi ezicetyiswayoUmzekelo, ayifanelanga ukuba nobunzima obungaphantsi kwe-350 gram ukunqanda ukugoba ngokulula kunye nokufunxa inki eninzi.
Ubuchule bokuyila kunye nokwahlulahlula bunokubakho ekusikeni iphepha, ewe kuya kufuneka usoloko ujonga okuhambelana nomfanekiso wenkampani yexesha elizayo khetha ukuba ikhadi lakho liza kuba njani, ngokwesiko, ngeenxa zonke okanye ngolunye uhlobo olukhethekileyo, inokuhlatywa ngaphakathi kwaye yenziwe imilo yoonobumba kunye namanani.
Izinto ezinokusetyenziswa, iphepha, ikhadibhodi, iPV kunye nezinye izinto zokwenziwa
I-PVC ebonakalayo okanye emhlophe isebenza kakuhle ukuyiprinta kwaye iyamelana ngakumbi kunephepha, enye indlela amakhadi omazibuthe iyasebenza kwaye ayophuli. Ngokucacileyo, ezi ndlela zinobunkunkqele zibiza kancinci, kodwa uthatha isigqibo sokuba kufanelekile.
Ngokubhekisele kwiifomathi, kukho umgangatho oyi-8,5cm x 5,4cm ilungele ukuphatha kwisipaji, kodwa kukho ezinye iindlela zokwenza ukuba zincinci kwaye zisebenze okanye ziphindwe kabini ukubeka ulwazi ngakumbi kunye nokusebenza.
Njengoko uza kubona, ngokuqinisekileyo la manyani akaphulukananga nokusebenza kwawo kunye nokusebenza kwawo konke konke, sikwazile ukuyiqinisekisa ngayo yonke into enikezelwa yimarike ukuyila ikhadi leshishini elikhethekileyo, ngobuchule obuninzi bokuyila, ngeendleko ezifikelelekayo, ngezixhobo ngendlela othanda ngayo, uyilo lokhetho lwakho, olunolwazi oluninzi okanye oluncinci, elula, ephindwe kabini, engenakwaphuka, esebenzayo, encinci, esemgangathweni, eneekhowudi zeQR kwaye ngaphandle kokulahlekelwa yintoni yindlela efanelekileyo yokufumana ulwazi lwenkampani yakho kwabanye okanye iinkonzo ngexesha lokwenyani, ngokobuqu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amakhadi oshishino angaze aphume ngohlobo
Uphawu lwePenguin lulandela umkhwa woyilo lwangoku kunye nophawu lwayo olutsha lweEbury